Inqubomgomo Yobumfihlo | Izindaba zeNAB | I-2020 NAB Show Media Partner kanye noMkhiqizi we-NAB Show LIVE. Izindaba Zobunjiniyela Zokusakaza
I-Broadcast Beat - Inqubomgomo Yobumfihlo
Ubumfihlo bakho bubalulekile kithi, ngakho-ke senze Inqubomgomo Yobumfihlo equkethe imininingwane ebalulekile njengokuthi singobani, siluthatha kanjani futhi kungani ulwazi lwakho lomuntu siqu, nokuthi silusebenzisa futhi silugcina kanjani lolu lwazi, kufaka phakathi maqondana nokufinyelela kwakho kanye nokusetshenziswa kwewebhusayithi yethu kanye nezicelo (izinhlelo zokusebenza). Sicela ukuthi uyifunde ngokucophelela ngoba iqukethe imininingwane ebalulekile futhi ichaza nokuthi ungasithinta kanjani uma unemibuzo. Futhi sicela wazi ukuthi ngokusebenzisa izinsizakalo zethu, sithatha ukuthi ujabule ngathi ukucubungula imininingwane yakho njengoba kuchaziwe kule Nqubomgomo Yobumfihlo.
Ukusakaza Beat kuyinto yedijithali yemidiya yedijithali eklanyelwe ukuhlinzeka ngobuchwepheshe izindaba-kanye-nolwazi kumboniso wokusakaza, isithombe sokunyakaza kanye nokukhiqizwa kokuthunyelwe. Sitholakala ku-4028 NE 6th Avenue, Fort Lauderdale, FL 33334. Inombolo yethu yokuxhumana i-954-233-1978. Ukufinyelela ku-platform yethu kuyatholakala ngqo kwiwebsite yethu www.broadcastbeat.com. Ukusakaza Beat kuzinikele ekuvikeleni ubumfihlo kanye nedatha kulabo abalandela okuqukethwe kwethu.
Ulwazi Lwakho Lomuntu siqu
Siyabonga ngokulandela izindaba nolwazi esilunikeza embonini yethu futhi sibheka imininingwane yakho ebucayi yedatha. Umgomo wethu ukuqinisekisa ukuthi ukudluliswa kwethu kuphephile futhi ubumfihlo bakho buyagcinwa. Ngaphezu kwalokho, uma upheqa amakhasi wethu wewebhusayithi, sikulandelela lokho ngezinhloso zokuhlaziya njengokuhlola ukwakheka okusha, okusebenziseka kalula nezihloko ozithandayo. Sizogcina noma imiphi imininingwane oyithumela ngokuzithandela; isibonelo, ama-imeyili wokuxhumana, iziphakamiso zohlelo, imibuzo ephathelene nokuhlelwa kwezinhlelo embonini, izicelo zezingxoxo, amaphepha amhlophe, ama-webinar nemincintiswano.
Ukuvikelwa kwedatha yakho yomuntu siqu
Isaziso sethu sobumfihlo sikutshela ukuthi iyiphi idatha yomuntu siqu (PD) nedatha engeyona yomuntu (i-NPD) esingayibutha kuwe, ukuthi siyiqoqa kanjani, ukuthi siyayivikela kanjani, ukuthi ungayifinyelela kanjani futhi uyishintshe. Isaziso sethu sobumfihlo sibuye sichaze amalungelo athile angokomthetho onakho ngokuqondene nedatha yakho yomuntu siqu.
Uma usebenzisa iwebhusayithi yethu nezinhlelo zokusebenza, futhi uthumele idatha yomuntu siqu kithi, ungase ube namalungelo athile ngaphansi kweMigomo Yokuvikela Yedatha Yonke (GDPR) neminye imithetho. Kuye ngesisekelo esingokomthetho sokucubungula idatha yakho yomuntu siqu, ungaba nelungelo noma amanye amalungelo alandelayo:
Ilungelo lokwaziswa - Unelungelo lokwaziswa ngemininingwane yomuntu esiyiqoqayo kuwe, nokuthi siyicubungula kanjani.
Ilungelo lokufinyelela - Unelungelo lokuthola isiqinisekiso sokuthi imininingwane yakho iyacutshungulwa futhi unamandla okufinyelela imininingwane yakho.
Ilungelo lokuphinda ulungiswe - Unelungelo lokulungiswa kwemininingwane yakho uma ingalungile noma ingaphelele.
Ilungelo lokusula (ilungelo lokukhohlwa) - Unelungelo lokucela ukususwa noma ukususwa kwedatha yakho uma singekho isizathu esinamandla sokuthi siqhubeke siyicubungule.
Ilungelo lokukhawulela ukucubungula - Unelungelo 'lokuvimba' noma ukhawulele ukucubungula imininingwane yakho. Lapho imininingwane yakho ivinjelwe, sivunyelwe ukugcina idatha yakho, kepha hhayi ukuyicubungula ngokuqhubekayo.
Ilungelo lokuphatheka kwedatha - Unelungelo lokucela futhi uthole idatha yakho siqu owasihlinzekele yona futhi uyisebenzise ngezinhloso zakho. Sizokunikeza idatha yakho ezinsukwini ezingu-30 zesicelo sakho. Ukuze ucele idatha yakho yomuntu siqu, sicela uxhumane nathi usebenzisa ulwazi phezulu kwalesi saziso sobumfihlo.
Ilungelo lokuphikisa - Unelungelo lokusiphikisa ukucubungula imininingwane yakho ngenxa yalezi zizathu: Ukucubungula kwakususelwa kuzintshisekelo ezisemthethweni noma ekwenzeni umsebenzi ngentshisekelo yomphakathi / ekusebenziseni igunya elisemthethweni (kufaka phakathi ukuphrinta); Ukumaketha okuqondile (kufaka phakathi ukuphrinta); kanye Nokucubungula izinhloso zocwaningo lwesayensi / lomlando kanye nezibalo. Amalungelo maqondana nokuthathwa kwezinqumo okuzenzakalelayo nokwenziwa kwamaphrofayili.
Ukuthatha izinqumo okuzenzakalelayo komuntu ngamunye nokufaka imininingwane - Uzoba nelungelo lokungathathelwa isinqumo esincike ekucutshungweni okuzenzakalelayo, kufaka phakathi ukuphrinta, okuveza imiphumela yezomthetho mayelana nawe noma ukukuthinte ngokufanayo.
Ukufaka isikhalazo neziphathimandla - Unelungelo lokufaka isikhalazo kubasemagunyeni uma ngabe imininingwane yakho ingacubungulwa ngokuhambisana noMthethonqubo Wokuvikelwa Okujwayelekile. Uma iziphathimandla zokuphatha zihluleka ukubhekana nesiphakamiso sakho ngokufanele, ungaba nelungelo lokulungisa ikhambi. Ukuze uthole imininingwane mayelana namalungelo akho ngaphansi komthetho, vakashela www.privacyshield.gov/
Ngeke sihlinzekele idatha emthethweni ngaphandle kwekhotho yenkantolo. Uma lokho kwenzeka, sizozama ukukwazisa ngesicelo ngaphandle kokuthi sivinjelwe ngokomthetho ukwenza kanjalo.
Uma usebenzisa i-Broadcast Beat singasebenzisa "amakhukhi", "ama-web beacons", namadivayisi afanayo ukulandelela imisebenzi yakho. Lezi zicucu ezincane zolwazi zigcinwe kwi-hard drive yakho, hhayi kwiwebhusayithi ye-Broadcast Beat.
Sisebenzisa amakhukhi ukukusiza ukuthi uzulazule kuwebhusayithi ye-Broadcast Beat kalula, futhi ukhumbule imininingwane mayelana nesikhathi sakho samanje. Asisebenzisi lobu buchwepheshe ukukuhlola noma kungenjalo sihlasele ubumfihlo bakho. Ungakhubaza amakhukhi nobuchwepheshe bokulandela ngomkhondo ngesiphequluli sakho sewebhu.
Iwebhusayithi yeBroadcast Beat inezinyathelo ezijwayelekile zomkhakha ezenzelwe ukuvikela ukulahleka, ukusetshenziswa kabi, kanye nokuguqulwa kolwazi olulawulwa yithi. Yize ingekho into enjengokuthi "ukuphepha okuphelele" kwi-Intanethi, sizothatha zonke izinyathelo ezizwakalayo ukuqinisekisa ukuphepha kwemininingwane yakho.
Yonke idatha iyabhala ngekhodi SSL / TLS lapho kudluliselwa phakathi kwamaseva ethu nesiphequluli sakho. Idatha yethu yedatha ayibhaliwe (ngoba idinga ukuthi itholakale ngokushesha), kodwa siya ekude kakhulu ukuvikela idatha yakho ekuphumuleni.
Ngeke sithengise noma sabelane ngale datha kunoma yiziphi izinkampani zangaphandle.
Senza ukugcina okulondoloziwe, oklanyelwe ukutakula uhlelo oluhle, ngezinsuku ezingu-30. Ama-backups ahlanjululwa kumjikelezo wosuku lwe-30. Uma ama-imeyili efundwa futhi engagcinwa, ahlanzwa ngokuzenzakalelayo kumjikelezo wosuku lwe-30.
Ukuchitshiyelwa kwalesi sitatimende kuzothunyelwa kule URL futhi kuzosebenza ngempumelelo uma ithunyelwe. Ukusebenzisa kwakho okuqhubekayo kule sayithi kulandela ukuthunyelwa kwanoma yisiphi isichibiyelo, ukuguqulwa, noma ushintsho kuyoba ukwamukela kwakho ukuchitshiyelwa. Sizokukwazisa mayelana nezinguquko ezibalulekile ngokuthumela i-imeyili kumnikazi we-akhawunti noma ngokufaka isaziso esivelele kusayithi lethu. Uma unemibuzo mayelana nalesi sitatimende sobumfihlo noma ukusebenzelana kwakho ne-Broadcast Beat, ungaxhumana nathi [i-imeyili ivikelwe].